UGAAR AH DUMARKA: 5 Calaamadood Oo Lagu Garto Ninka Naagaha Badan - Aayaha
Haweeney Kasta waxay rabtaa nin ugaar ah ma rabaan in liiska ay kuwa kale kula jiraan, mana jirto naag rabta nin naago badan maadaama ninka naagaha badan uusan rabin xiriir qoto dheer isla markaana uu rabo uu kaliya naag uu markaas sariirta saarto.
Aayaha.net ayaa waxa ay idiin soo gudbineysaa 5 sifo oo lagu garto ninka naagaha badan.
Naago ayuu raadiyaa
Ninka naagaha badan ma joojinaayo raadinta naago kale xitta haddii uu heysto naagaha adduunka ugu quruxda badan sidaa darteed had iyo jeer wuxuu raadiyaa naago indhihiisana had iyo jeer way shaqeeyaan, haddii uu nin bilaabo inuu isha la raaco ama la had hadlo naag adiga oo la jooga waxaa macquul ah inuu noqdo naago badane.
Markii taleefanka ninkaaga aadan qaban Karin 5 ilbiriqsi, waxay qeyb ka tahay calaamadaha lagu garto naago badanaha, naago badanaha waxaa lagu gartaa taleefankiisa mar kasta wuu xiranyahay sababta uu taleefanka u xirtana waxay tahay ma doonayo inaad aragtid fariimaha iyo sawirada ay isweydaarsadeen gabdhaha kale, ninka naagaha badan xittaa kuuma ogolaanayo inaad taleefankiisa ku ciyaartid game maxaa yeelay waxyaabo ayaad ku arkeysaa mana rabyo inaad aragtid marka haddii uu ninkaaga ku dhibsado waqti kasta ood usoo dhawaatid taleefankiisa wuxuu noqon karaa naago badane.
Magacaaga ayuu kuugu yeeraa
Qalad ma ahan in ninkaaga uu kuugu yeero magacyada sida , Qalbi, Mcnto, xabiibti gacaliso iyo wixii lamid ah balse haddii uusan magacyadaas kuugu yeeran waxbaa jira oo muujin kara inuu yahay naago badane, naago badanaha wuxuu had iyo jeer kuugu yeeraa magacaaga caadiga ah, marka goorma ayay ahayd markii ugu dambeysay uu ninkaaga kuu yeero magacaaga?.
Balan kama soo baxo
Naago badanaha wuxuu ku wanaagsanyahay sameynta ballamaha basle aad ayuu ugu liitaa inuu kasoo baxo, wuxuu rabaa inuu sariirta ku saaro sidaa darteed wuu ogyahay ballantii uu kaa qaaday inuu isaga bur buriyay marka wey adagtahay inuu balan kasoo baxo.
Naago badanaha wuu ogyahay in haweenka ay jecelyihiin ammaanta wuxuuna u isticmaalaa si uu uhelo naagaha uu rabo marka haddii uu aad kuu ammaano ka digtoonoow maxaa yeelay waa kuwo lagugu gaadaa oo daacadnimo aysan kujirin isla markaana uu kugu soo jiidanayo marka ragga naagaha badan in hablaha ay aad u ammaanaan waa hubkooda qarsoon oo ay naagaha kusoo xero galiyaan.
Sidaa darteed, Ninkaaga ma naago badanyahay?